192.168.8.1 - Shuruudaha iyo Xaaladaha
Ku soo DHAWOOW 192.168.8.1!
Shuruudahaan iyo shuruudahaani waxay tilmaamayaan xeerarka iyo qawaaniinta loo adeegsado Websaydhka 192.168.8.1, oo ku yaal https://19216881.one/.
Markaad gasho degelkan waxaan u maleyneynaa inaad aqbashay shuruudaha iyo shuruudaha. Ha usii wadin isticmaalka 192.168.8.1 haddii aadan oggolaan inaad qaadatid dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha lagu sheegay boggan. Shuruudaheena iyo Xaaladaheena waxaa la abuuray iyadoo la kaashanayo Shuruudaha iyo shuruudaha shuruudaha iyo Shuruudaha & Xaaladaha Bilaashka ah.
Ereybixinta soo socota ayaa lagu dabaqayaa Shuruudahaan iyo Shuruudaha, Bayaanka Asturnaanta iyo Ogeysiiska Diidmada iyo dhammaan Heshiisyada: “Macmiil”, “Adiga” iyo “Taada” ayaa adiga kuu tilmaamaysa, qofku wuxuu galayaa websaydhkan una hoggaansamayaa shuruudaha iyo shuruudaha Shirkadda. "Shirkadda", "nafteenna", "Annaga", "Kuweenna" iyo "annaga", waxay loola jeedaa Shirkadeena. "Xisbiga", "Xisbiyada", ama "Annaga", waxaa loola jeedaa macmiilka iyo nafteenaba. Dhammaan shuruudaha waxaa loola jeedaa soo-jeedinta, aqbalaadda iyo tixgelinta bixinta lacag-bixinta ee lagama maarmaanka u ah in la qaado geeddi-socodka gargaarkeenna Macmiilka habka ugu habboon ujeeddada cad ee ah la-kulanka baahida macmiilka ee ku saabsan bixinta adeegyada ay sheegtay Shirkadda, iyadoo la raacayo oo ku xiran, sharciga jira ee Nederland. Adeegsi kasta oo eraybixinta kor ku xusan ama ereyo kale oo keli ah, jamac, xaraf weyn iyo / ama isagu / iyadu ama iyadu, waxaa loo qaadaa inay yihiin kuwo la isku beddeli karo sidaa darteedna loola jeedo isku mid.
Inta badan bogagga intarnetka ah waxay isticmaalaan cookies si aynu u soo qaadno faahfaahinta isticmaalaha booqasho kasta. Kukiyada waxaa isticmaala boggayaga internetka si aanu ugu shaqeyno goobaha qaarkood si ay u fududeeyaan dadka booqanaya bartayada internetka. Qaar ka mid ah xariirka / xayeysiinta xayeysiinta ayaa sidoo kale isticmaali kara cookies.
Haddii aan si kale loo sheegin, 192.168.8.1 iyo / ama shati bixiyeyaasheeda ayaa leh xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee dhammaan waxyaabaha ku jira 192.168.8.1. Dhammaan xuquuqda lahaanshaha aqooneed way keydsan yihiin. Waxaad ka heli kartaa tan laga bilaabo 192.168.8.1 si aad ugu isticmaasho adeegsigaaga shaqsiyeed ee lagu soo rogay xayiraado lagu dejiyay shuruudaha iyo shuruudahaan.
Dib u daabac walxaha laga soo bilaabo 192.168.8.1
Iib, kiro ama liisanka sub-ka laga bilaabo 192.168.8.1
Soo-saar, nuqul ama nuqul nuqul laga soo bilaabo 192.168.8.1
Dib-u-qaybi nuxurka laga soo bilaabo 192.168.8.1
Heshiiskani wuxuu bilaabmayaa taariikhda halkan.
Qeybo ka mid ah degelkani wuxuu fursad u siiyaa dadka isticmaala inay soo diraan oo ay is dhaafsadaan fikradaha iyo macluumaadka meelaha qaarkood ee websaydhka. 192.168.8.1 ma shaandheeyo, wax ka beddesho, daabacdo ama dib u eegto Faallooyinka ka hor intaanay ku jirin degelka. Faallooyinku kama tarjumayaan aragtiyada iyo ra'yiga 192.168.8.1, wakiilladooda iyo / ama kuwa ku xiran. Faallooyinka waxay ka tarjumayaan aragtida iyo ra'yiga qofka soo qoro ra'yigooda iyo ra'yigiisa. Ilaa xadka ay oggol yihiin sharciyada khuseeya, 192.168.8.1 mas'uul kama noqon doonto Faallooyinka ama wixii mas'uuliyad ah, waxyeelo ama kharashyo ay keeneen iyo / ama ay la kulmeen adeegsiga iyo / ama dhajinta iyo / ama muuqaalka Faallooyinka boggaan.
192.168.8.1 waxay xaq u leedahay inay kormeerto dhamaan Faallooyinka iyo inay ka saarto wixii Faallooyin ah ee loo qaadan karo inay yihiin kuwo aan habboonayn, meel ka dhac ku ah ama sababa jebinta Shuruudaha iyo Shuruudaha.
Waxaad ubaahan tahay oo u taagan tahay:
Waxaad xaq u leedahay inaad soo dhajiso Faallooyinka ku yaal boggayaga internetka waxaanan leenahay ruqsadaha lagama maarmaanka ah iyo raali-gelinnada si aad u sameyso
Faallooyinka kuma xadidaan xuquuq kasta oo khuseeya fikradaha, oo ay ku jirto aan xadidnayn xuquuqda daabacaadda, patent ama calaamad ka mid ah koox kasta oo saddexaad;
Faallooyinka kuma jiraan wax necbaansho ah, qashqashaad, weerar, qaawan ama waxyaabo kale oo sharci-darro ah kaas oo ah weerar kufsi
Faallooyinka looma isticmaali doono si looga dhigo ama u dhiirrigeliyo ganacsiga ama caadada ama soo bandhigaan dhaqdhaqaaq ganacsi ama hawlo sharci darro ah.
Waxaad halkan ku siineysaa 192.168.8.1 shati aan gaar aheyn oo loo adeegsado, la soo saaro, wax looga beddelo loona oggolaado dadka kale inay isticmaalaan, soo saaraan oo ay wax ka beddelaan mid ka mid ah Faallooyinkaaga nooc kasta iyo nooc kasta, qaabab ama warbaahin.
Ururrada soo socda ayaa laga yaabaa inay isku xirmaan Website-kayaga iyaga oo aan haysan qoraal oggolaansho ah:
Liisaska looyarada internetka ayaa laga yaabaa inay ku xirmaan Websitekeena si la mid ah maaddaama ay kufilan yihiin shabakadaha ganacsiyada kale ee taxanaha ah; iyo
Ganacsatada loo yaqaan "Accredited Businesses" marka laga reebo ururrada aan faa'iido doonka ahayn, suuqyada dukaamada lagu iibiyo, iyo ururada samafalka ee samafalka ah kuwaas oo aan kufilan karin boggayaga internetka.
Ururadani waxay ku xiran karaan boggeena guriga, daabacaadyada ama macluumaadka kale ee Websiteka ilaa inta ay ku xirantahay xiriirka: (a) ma aha mid si khiyaano leh; (b) si been ah loola jeedo maalgalin, oggolaansho ama ansixin qaybta isku xirka iyo alaabta iyo / ama adeegyada; iyo (c) ku habboon yahay macnaha guud ee goobta isku xirka xisbiga.
Waxaa laga yaabaa inaan tixgelinno oo aan ansixino codsiyada kale ee xiriiriya noocyada ururada soo socda:
macaamiisha caadiga ah iyo / ama ilaha macluumaadka ganacsiga;
dot.com goobaha bulshada;
ururada ama kooxaha kale ee matalaya hay'adaha samafalka;
bixiyeyaasha buugta internetka;
xisaabinta, sharciga iyo shirkadaha la-talinta; iyo
hay'adaha waxbarashada iyo ururada ganacsiga.
Waxaan ansixin doonnaa codsiyada xiriirinta ee ururadan haddii aan go'aansano in: (a) xiriirku uusan naga dhigaynin inaan si aan fiicnayn nafteenna u eegno ama ganacsiyadayada la aqoonsan yahay; (b) hay'addu ma lahan wax diiwaanno taban ah annaga; (c) faa iidada ay inaga siiso muuqaalka kore ee 'hyperlink' waxay magdhaw u tahay maqnaanshaha 192.168.8.1; iyo (d) xiriirku wuxuu ku jiraa macnaha guud ee macluumaadka kheyraadka.
Ururadani waxay ku xiran karaan boggeena guriga ilaa inta ay ku xirantahay xiriirka: (a) ma aha mid si khiyaano leh; (b) si been ah looma sheegin maal-galinta, oggolaanshaha ama oggolaanshaha qaybta isku xirka iyo alaabta ama adeegyada; iyo (c) ku habboon yahay macnaha guud ee goobta isku xirka xisbiga.
Haddii aad ka mid tahay hay'adaha ku taxan farqadda 2-aad ee kor ku xusan oo aad xiiseyneyso ku xirnaanshaha degelkeenna, waa inaad nagu soo wargelisaa adigoo emayl u diraya 192.168.8.1. Fadlan ku dar magacaaga, magaca ururkaaga, macluumaadka xiriirka iyo sidoo kale URL-ka bartaada, liistada URL kasta oo aad damacsan tahay inaad ku xirto Websaydhkeenna, iyo liistada URL-yada ku yaal boggeena aad jeclaan lahayd isku xidhka. Sug jawaab celin 2-3 toddobaad ah.
Ururada la ansaxiyay waxay kufilan karaan Websitekayaga sida soo socota:
Adoo isticmaalaya magaca shirkadeena; ama
Isticmaalka nambarka khayraadka ee lebiska ee lala xiriirinayo; ama
Isticmaalka sharaxaad kasta oo ka mid ah boggayaga internetka oo loola jeedo in taasi macno u yeelato macnaha guud iyo qaabka content ee ku saabsan bogga isku xiraya ee xisbiga.
Looma adeegsan karo astaanta 192.168.8.1 ama farshaxan kale ayaan loo oggolaan doonin iskuxirka maqnaanshaha heshiiska liisanka sumadda ganacsiga.
Hore ansaxin oggolaansho iyo ogolaansho qoraal ah, waxaa laga yaabaa inaadan abuurin muraayadaha ku yaal boggayaga oo wax ka bedelaya bandhig muuqaalka ama muuqaalka boggeena.
Kuma ahaan doonno masuuliyad ka saaran wax kasta oo ka muuqda boggaaga. Waxaad ogolaatay inaad ilaaliso oo aad naga difaacdo dhammaan sheegashooyinka kor u kaca website-kaaga. Lama helin xiriirin (s) kasta Website kasta oo loo turjumo sida xatooyo, qashqashaad ama dambiile, ama xadgudub ku ah, haddii kale waa ku xadgudbaa, ama u doodaa xadgudubka ama xadgudubyada kale, xuquuqda kale ee saddexaad.
Fadlan akhri siyaasadda asturnaanta
Waxaanu xaq u leenahay inaan ka codsano in aad ka saarto dhammaan khadadka ama xiriir kasta oo gaar ah our Website. Waxaad ogolaatay in aad isla markiiba ka saarto dhamaan isku xirnaanta boggayaga internetka marka la codsado. Waxa kale oo aanu xaq u leenahay in aan aqbalno shuruudahaan iyo shuruudahaan iyo in ay isku xiran yihiin siyaasad wakhti kasta. Si joogto ah ula xiriirta boggayaga internetka, waxaad ku raacsan tahay inaad ku xiran tahay kuna raaci lahayd shuruudaha iyo xaaladaha xiriirinaya.
Kala saarida xiriirka boggeena internetka
Haddii aad aragto isku xirnaanta boggayaga internetka oo ah mid khatar ah sabab kasta, waxaad xor u tahay inaad la xiriirto oo na soo wargeliso wakhti kasta. Waxaan tixgelin doonaa codsiyada ka bixista xiriirka laakiin ma ahan waajib nagu ah inaan ama aan si toos ah ugaaga jawaabno.
Ma hubno in macluumaadka ku yaal boggani uu yahay mid sax ah, ma aqbaleyno dhamaystirkeeda ama saxsanaanta; mana ballanqaadeyno in aan xaqiijino in website-ka weli la heli karo ama in maaddada website-ka la sii hayo.
Ilaa inta ugu badan ee sharcigu dhigayo, waxaan ka saarnaa dhammaan wakiilada, damaanad-qaadyada iyo shuruudaha la xiriira boggayaga internetka iyo isticmaalka boggan. Wax kasta oo ka mid ah shuruudahan:
xaddid ama ka saaraan noo ama mas'uuliyaddaada dhimashada ama dhaawaca shakhsi ahaaneed;
xaddidaan ama ka saaraan ama naga saaraan masuuliyadeena khiyaanada ama been-abuurka been-abuurka ah;
xaddidaan mid ka mid ah noocyadeena ama deymahaaga si kasta oo aan looma oggola sida waafaqsan sharciga; ama
ka saar mid kasta oo ka mid ah noo ama deymahaaga aan laga saari karin sharciga sharci ahaan.
Xaddidaadaha iyo mamnuucidda masuuliyadda lagu qeexay Qaybtan iyo meelo kale oo ka mid ah shuruudahan: (a) waxay ku xiran tahay cutubka hore; iyo (b) inay xukumaan dhammaan wixii qandaraasle ah ee soo baxaya ee ka yimaada qaan-sheegaha, oo ay ku jiraan kharashyada ka soo baxa qandaraaska, ku jira xabsiyada iyo jebinta waajibaad sharciyeed.
Ilaa iyo inta barta internetka iyo macluumaadka iyo adeegyada ku yaal bogga internetka ee lacag la'aanta ah, waa inaanan masuul ka aheyn wax khasaare ah ama waxyeelo nooc kasta ah.